कसरि आयो इनारबाट एक्कासी उमालेभन्दा तातो पानी : यस्तो रहेछ कारण [भिडियोसहित] - Ujyalo Khabar
Complete news site
कसरि आयो इनारबाट एक्कासी उमालेभन्दा तातो पानी : यस्तो रहेछ कारण [भिडियोसहित]
काठमाडौ । भक्तपुरको चाँगुनाराण नगरपालिका वडा नं. १ दुवाकोट रोक्कागाँउमा केही दिन अगाडी सबै चकित हुने घ’टना भयो । त्यहाँ स्थित एक स्थानीयको घरमा करिब २२ फिट मात्र गहिरो इनारबाट उमालेभन्दा तातो पानी निस्किन थालेको थियो । त्योपनि ३ दिन पहिलेदेखि सिँधै नुहाँउनै नसकिने तातो पानी आउँन थालेपछि घरबेटी र डेरावाल चकित बने । उनीहरुले छिमेकीलाई बोलाएर त्यो आ’श्चार्यचकित घ’टनाका बारे बताए । स्थानीयले थाहा पाएपछि सबै भेला भए ।
सबै छिमेकी भेला भएर पानी छुँदा साँच्चै सबै चकित बने । कसैले नागराजाको खेलका कारण यस्तो भएको आ’शंका गरे । कसैले भौगर्वीक परिवर्तन भएको हुनसक्ने भन्दै त्रा’सका कुरा गरे । कसैले ग्यासका कारण त कसैले ज्वा’लामु’खी वि’ष्फोट हुनसक्ने भन्दै आत्ति’ए । कसैले त यो प्रकृतीको उपहार प्राप्त भयो । अब तातोपानीको कुण्ड बनाएर आफ्नो टोलको मुहार नै फेर्ने सपनापनि देखे । त्यहाँ त्रा’ही त्रा’ही भएको खबर हामीलाई आयो । जनबोली न्यूजको टीम त्यहाँ पुग्यो । जनबोली टीमले यसरी तातो पानी आउँनुको खास कारण पत्ता लगाएको छ । सबै जानकारी मिल्नेछ ।
Next बुढेसकालमा बिवाह गरेका राजेश हमालको यसकारण जन्मिएन बच्चा, उनकै मुखबाट सुन्नुहोस यसको कारण (भिडियो)
नेपालमै पहिलोपटक बसभित्रै पार्टी प्यालेस, क्लब, ‘यस्ता छन् सुबिधा’ पार्टी गर्न कति लाग्छ त खर्च ?
एक वर्ष पहिले सार्वजनिक बसमा हस्तमैथुन गरेर युवतीको कपालमा विर्य झारिदिने रविन पक्राउ : कसरि समात्न सफल भयो त प्रहरी ?
मान्छे उड्यो आकाशमा : मान्छे उडेर नै ५६० किलोमिटर पार ..
संसारकै महँगा मोबाइल, मूल्य सुन्दा होस् नै उड्ने !
अक्षय कुमारका ‘जुम्ल्याहा भाइ’ वर्षौ पछी भेटिए कश्मीरमा !